Блог Aha Echiche: Atụmatụ Iji Họrọ Zuru okè Aha N'ihi na gị Блог
Na-agbalị ịhọrọ aha maka блог ha.
Ịkpọ blog nwere ike ịbụ ihe siri ezigbo ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ụ bụ onye ọhụrụ maka ịde blọgụ na ịkọ ihe. Maọbụrụ naịdị ka m, nwere ike iji ọtụtụ awa na-atụgharị uche maka aha, наанị iji mejupụta ndepụta nke crappy.
Ọфiн, оби dị m ụtọ na ị jụrụ! Ọ bụrụ na ị bụ ụdị kpọrọ asị na-eme aha ma ọ bụ na ọ bụ ihe dị egwu na ya, abịawo m ụfọdụ atụmatụ na usoro iji nyere gị aka ịmepụta ma wepụta aha zuru oka блог.
1 ND # MỌD # # 1: Гхита оту ага гị си на анọчите ика гị на блог
3 Ntuziaka # 3: Jiri Существительные, глаголы, maọbụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị на Ọdịnaya Gị
5 Ịчọта Ага Ага Зуру Оке
ND # MỌD # # 1: Гхита оту ага гị си на анọчите ика гị на блог
Ага блог gị kwesịrị ịkọ na ụdị ọdịnaya ị na-eme. Были ли вы на блоге и на блоге? "Уголок Гурмана" ma ọdịnaya gị bụ maka ụtụle ihe gbasara ntutu isi maka ụmụ nwoke, a ga – eme kа ndị na – agụgụ ihe na –
N’otu aka ahụ, ụ bụrụ na ị nwere aha ụlọ ọrụ / nke dị jụụ ma dee ya n’olu ụda olu, на-ые онье-на-ага я его на ezighị ezi wee хапụ ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха kweswrị iji gị kpọrọ ihe ma ọ bụ na ha ekwesịghị.
На-Агбанве-Агбанве-на-Ика-Го-На-И-Хе-на-Аньшите Анья Я!
ỌỌụụụịọịọọọọọiteọọọọọọọ blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blogriririririririri,,,,,,,,,,, ,ịịịịịọọọọọọ,,,,,, ,ịịịịịọọ (ọọọọọọị ịị-e eriri yọọ y y y y y yịịị okririri y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y (y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.
Blog ụ blog blog blog blog blog ị any any us us us us us,,,,,,,,,,,,,,, (((((((((((((((((((((,,,,, blog.
N’oge a, ịga-enwe echiche nke okwu ndị kachasị mma ịkọwapụtara na blog gị. Ugbu na-abịa ebe egwuregwu ах! Буру айсавр, ​​ма obu buru ibu thesaurus.com, на ли окве, йи йы я нке нве ике иджи мака ага блог gị.
Ка аньё квуо наịна-эмэ блọọгụ нри. We nwere ike ikpebi na ọtụtụ ọdịnaya ga-abụ isiokwu ndị na-esonụ: Nri, nri siri ike, vegan, mmega ahụ, оби ụtọ, ntụziaka, на ihe орири.
Tinye okwu ndị ahụ n’ime thesaurus.com na ị ga-enweta okwu ndị dị ka nri, nri, ọhụụ, mma, ọṅụ, вкусности, nri, munchies, ike, оби, овощи, на оби ụtọ. Tinye ụfọdụ okwu ndị ahụ ọnụ (dị ka vegan munchies или Kwado nri nri) на вуаля, we не было ага maka блог gị.
Mgbe ị nọgidesiri ike na-eche echiche maka okwu iji aha gị blog, nwere ike iji thesaurus mee ihe ngwa ngwa maka ndepụta okwu.
Ntuziaka # 3: Jiri Существительные, глаголы, maọbụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị на Ọdịnaya Gị
Ị nwere ike ikpebi na iji тезаурус ahụ zuru ezu, мана ọ bọrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu gị na wakwa ọzọ, малите на агбаквные mkpụrụ okwu, okwu глаголы na / ma ọ bụ nụ.
Ntinye ederede, глаголы, na okwu ịkọwapụ nwere ike ịmezie ahazi aha gị, na-eme ka ọ bụrụ nke gị. Ọzọ, ọ na-enyere aka izere iji ihe ntanetụ na saịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ yiri nke gị.
Сайт на нчịкọта іхэ орири, weнве ике итине окву окву маọ бụнква и нд аба́бере на гị дịка блоггер, нке нве нэ ике ịбụ: онейси, нва окороба, нва агбụọọ, онье ндб, ндмбидо, ндмбидо , Nri Ehihie, ụlọ ọrụ, WDG
Дебе ха ọнụ на ịга-энвета ихэ бара ннукву уру дị ка нри ụмụака квесịрkвесị, веганский босс манчи, нтụка кичин ọхụрụ, ма ọ бụ ụлọ орири на-эдози ахụ.
Я хочу знать, что я тебя люблю. Я хочу знать, что я тебе нравлюсь. Ụfọdụ ihe atụ ga-abụ: ntụziaka nwa agbọghọ kwesịrị ekwesị, na-eri nri nri n’oge nri, ndị na-aṅụrị ị, dị mma ma dị ọhụrụ.
Мака и я не была мамой, я не была ике, ага, Мепита ма, бэ, мепта, окву, бхла, га-ак, ага, на блоге.
Nke a-naọ ntakịrị ihe na-eche echiche na-abụghị nke na-eche echiche ma ọ bụrụ na ime-elu nwere ike ịghọ ụzọ dị egwu iji gbakwunye egwu na aha aha gị. Ufodu ihe omuma atu bu snackzilla, ihe ndi ozo, sizzlerella, ahuike.
Atụla egwu wnwale ụdị okwu ọbụla ma nwee obi ụtọ na ya. Weнве ике имери ага дịмма нке ọ на-адịхị онье ọбла чере!
Ma eleghị ana, ịgbalịrị isi ihe niile dị n’elu ma ị ka na-enweghị ike ịbịara aha ọma. Enweghị nchekasị! Gbalịa jiri aha / okwu ngwaọrụ maka ụfọdụ aro dị ukwuu.
saịtị dị ka Wordroid.com bụ ngwá ọrụ dị ukwuu iji na-ejikọ ọnụ na okwu ọchị ma ọ dị mfe imme. Naanị tinye okwu nke metụtara ịdịnaya gị, pịa bọtịnụ "wordoids", ọ a en en ị ị de de a a we we we we we we we we.
Он говорит, что Wordroids bụ na ị nwere ike ịtọ ókè gị na okwu gị, kọwaa àgwà nke okwu ahụ, setịpụ ụkpụrụ ya, na ọbụna gụnyere ngalaba aha nnweta. Nke a pụtara naịnwe ike ịchọpụta ma aha ịchọrọ ịdenyere aha na .com ma mabọ naọbụghị, na-ewepweta nchekasị nke ịmepụta ihe dị egwu ma chọpụta na e are youa.
Ịчọта Ага Ага Зуру Оке
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga – если вы пишете блог на n’ikpeazụ, ọ bụ gị ka ị ga – екпеби ihe ọ bụ.
Ka o sina dị, ịmepụta aha agaghị abụ usoro ihe omimi. Nwee obi ụtọ ma soro ya mee ihe na ndị gụrụ gị ga-ahụ nke ahụ.
Cheta, enweghi iwu ndi siri ike mgbe abia ime aha. Ọ bụrụhaala na ị hụ na ọ na-ejikọta ọdịnaya gị, nwere ike ịbụ ihe okike dị ka ịchọrọ!
Ozugbo ịnwetara nke ahụ n’ụzọ debanye aha gị blog ngalaba, «na-elekwasị ana n’ihe ndị ka mkpa dị ka ede ederede epic na eto gi.
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na blogger ọ bụla na-eche? Na-agbalị ịhọrọ aha blog blog
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na blogger ọ bụla na-eche? Na-agbalị ịhọrọ aha maka blogg
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na 블로거 ọ bụla na-eche? Na-agbalị ịhọrọ aha maka 블로그